We.com.mm - နို့သီးခေါင်းကိုကိုက်မိလို့ မိခင်ဖြစ်သူမှ ကတ်ကြေးနဲ့ အချက်(၉၀)ကျော်ထိုး
လူတွေ အသိဉာဏ်တွေ ပျောက်လာတာလား ….? သနားညှာတာစိတ်တွေမရှိတော့တာလား ….? ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သားသမီး အပေါ်မှာတောင် ချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့စိတ်တွေမရှိကြတော့ဘူးလား ….? တကယ်ကို ရက်စက်လွန်းတဲ့ လောကကြီးတစ်ခုဖြစ်နေသလားတောင် ထင်ရလောက်တဲ့ ပြသာနာတွေ နေ့စဉ်တိုင်းကြားသိနေရပါတယ်။
အခုလည်း တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Jiangsu ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ (၈)လသားအရွယ်လေးကို မိခင်ဖြစ်သူ ကတ်ကြေးနဲ့ အချက်ပေါင်း (၉၀)ကျော်ထိုးလို့ ကလေးကို အရေးပေါ်ဆေးရုံပို့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီကလေးနာမည်ကတော့ Xiao Bao လို့ခေါ်ပါတယ်။ Xiao Bao လေးဟာ အမေဖြစ်သူ၊ ဦးလေးဖြစ်သူတို့နဲ့ အတူနေထိုင်ပြီး ဦးလေးဖြစ်သူက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။
တနေ့တော့ ဦးလေးဖြစ်သူ အပြင်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ Xiao Bao လေးကို သွေးအိုင်ထဲမှာတွေ့လို့ ဆေးရုံကို ချက်ချင်း အရေးပေါ် ပို့လိုက်ရပြီး အချက်(၁၀၀)ကျော်လောက် ချုပ်လိုက်ရပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ အမေဖြစ်သူက Xiao Bao လေးကို နို့တိုက်နေရာမှ နို့သီးခေါင်းကို ကိုက်လိုက်လို့ဆိုပြီး ဒေါသထွက်ကာ ကတ်ကြေးနဲ့ ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အချက်များစွာထိုးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ်နီးချင်းတွေက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကို တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရ Xiao Bao ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ စိတ်ရောဂါခံစားနေရတာမျိုး မရှိဘူးလို့ သိရတဲ့အပြင် သူမဟာ Xiao Bao လေးကို ကတ်ကြေးနဲ့ထိုးခဲ့တာကိုလည်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေက သက်ဆိုင်ရာကို ကလေးနဲ့ မိခင်အတူမထားဖို့ တောင်းဆိုပေမယ့် ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
F8 အစည်းအဝေးအပြီး Facebook ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ နေရာ နဲ့ ရာထူးအပြောင်းအရွှေ့တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ခေါက်ဆွဲခြောက်တင်ပို့မှုဖြင့် ဝင်ငွေများစွာရရှိနေသည့် တောင်ကိုရီးယား
မန္တလေးမြို့မှာ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်သမားကို သတ်ပြီး သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နဲ့ ပစ္စည်းများ လုယက်ခံရ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ရုရှားစစ်ဘက် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များပေးအပ်
မြိတ်မှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်နေစဥ် မိုးကြိုးပစ်လို့ လူ ၅ ဦး သေဆုံး
Coronavirus ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်မှုအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ဂျက်မား၊ ဘီလ်ဂိတ်နဲ့ ဘီလျံနာများ
ကိုယ်ဝန်(၆)လသည်ရဲ့ ပြားချပ်နေတဲ့ ဗိုက်ကြောင့် လူတွေ အားလုံးအံ့သြနေကြ
Chubby Face ဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား…?
အနီရောင်ကို အထာကျကျ ဘယ်လို ဝတ်ကြမလဲ